Minister of Foreign Affairs Frederick Musiiwa Makamure Shava
Click on a thumbnail below to read the relevant PESA Editorial regarding Zimbabwe.
Accurate and balanced analysis of the political economy in Zimbabwe ...
Click on a thumbnail below to read the relevant PESA Regional Integration Monitor relating to Zimbabwe.
Click on a thumbnail below to view the latest PESA Policy Dialogues on issues relating to Zimbabwe.
Interview about the recent decision by the Government of Zimbabwe to compensation white farmers who last land during the land-grabs during the early 2000s. The ...
Interview about the recent firing of Zambian central bank Governor Denny Kalyalya who was replaced by Christopher Mvunga at the Bank of Zambia. Following this ...
Interview about the SADC Council of Ministers virtual meeting which was hosted by Mozambique as the incoming Chair of SADC. The discussion reviews the SADC ...